context - ဝစ်ရှင်နရီ
အင်္ဂလိပ် ဝီကီပီးဒီးယားတွင် ဤအမည်ဖြင့် ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် ရှိသည်။
From လက်တင် contextus.
(RP) IPA(key): /ˈkɒntɛkst/
(GenAm) IPA(key): /ˈkɑːntɛkst/
context (ရေတွက်ရ နှင့် ရေတွက်မရ, အများကိန်း contexts)
ဖြစ်ရပ်၊ ဖြစ်စဉ်၊ အဖြစ်အပျက် စသည်တို့ကို အတိအကျ အဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်၊ ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးသည့် ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြေအနေ၊ အနေအထား၊ နောက်ခံ၊ ကိစ္စ။ တနည်း ဆက်စပ်စဉ်းစားစရာ အခြေအနေ။
In what context did your attack on him happen? - We hadapretty tense relationship at the time, and when he insulted me I snapped. (ဘာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူ့အပေါ် မင်းရဲ့ ထိုးနှက်မှု ဖြစ်ခဲ့တာလဲ။ - တို့တတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးက အဲဒီတုန်းက အတော်လေး တင်းမာခဲ့တာ ပြီးတော့ သူငါ့ကို စော်ကားတဲ့အခါ ငါလည်း ကျွတ်ဆတ်ဆတ်နဲ့ ပြန်ပြောတာပေါ့)
en, Phil McNulty, “Moldova 0-5 England”, in BBC Sport :
The display and result must be placed in the context that was it was againstaside that looked every bit their Fifa world ranking of 141 - but England completed the job with efficiency to record their biggest away win in 19 years.
(ဖီဖာကမ္ဘာ့အဆင့် ၁၄၁ လောက်ရှိပြီး အဲဒီအဆင့်လောက် ကောင်းပုံပေါ်တဲ့ အသင်းတစ်သင်းကို ယှဉ်ပြိုင်ကစားရတယ်ဆိုတဲ့ အနေအထားထဲမှာ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ရလဒ်တို့ကို သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အင်္ဂလန်အသင်းကတော့ ၁၉ နှစ်တာကာလမှာ သူတို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံး အဝေးကွင်းအောင်ပွဲကို စွမ်းရည်ရှိရှိ စံချိန်တင် ရယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။)
(linguistics) စာအစီအစဉ်၊ ရှေ့နောက်စကား၊ စကားအဆက်အစပ်။
Without any context, I can't tell you if the "dish" refers to the food, or the thing you eat it on. (စကားအဆက်အစပ်မရှိဘဲနဲ့ "ဟင်းပွဲ"ဆိုတာ မင်းစားနေတဲ့ အစားအစာလား (သို့) အဲဒီအစားအစာကို ထည့်စားတဲ့ တစ်ခုခု(ပန်းကန်) လားဆိုတာတော့ မပြောနိုင်ဘူး။)
"https://my.wiktionary.org/w/index.php?title=context&oldid=846719" မှ ရယူရန်
လက်တင်မှ ဆင်းသက်လာသော အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ
အင်္ဂလိပ် 2-syllable words
IPA အသံထွက် ပါဝင်သော အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရများ
အဘိဓာန်တွင် ပါရှိသော အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရပုံစံများ
အင်္ဂလိပ် ရေတွက်မရ နာမ်များ
အင်္ဂလိပ် ရေတွက်ရ နာမ်များ
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၀၁:၃၃ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။